Ogaden News Agency (ONA) – Siminaarkii Jaaliyaadka Yurub oo Galay Maalintii 3aad.
Siminaarkii Jaaliyaadka Yurub oo Galay Maalintii 3aad.
Posted by ONA Admin	/ April 13, 2014
Siminaarkii Hawlwadeenka ONLF ee Jaaliyaadka Qaarada Yurub aay galay maalintiisii 3aad. Siminaarkan oo furmay Jumcihii ooy taariikhdu ahayd 11/4/2014 ayaa lagu wadaa in maanta lasoo gabagabeeyo. Waxaa maanta laqorshaynayaa in qodobo muhiim ah lagu soobandhigo haduu eebuhu yiraahdo.
Maalinta 3aad ee simnaarkan yaa lagu furay warbixin dheer oo Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO), Adminal Maxamed Cumar Cisman uu kula wadaagay madaxda iyo hawlwadeenka Jaaliyaadka JWXO ee Yurub warbixin meelo badan taabanaysa. Warbixinta oo kuqabsoontay dhanka qalabka isgaadhsiinta yuu gudoomiyuhu siwaafi ah ooga warbixiyay xaalada Ogadenya, xaalada Gumaysiga iyo waajibaadka saaran Jaaliyaadka Somalida Ogadenya ee kudhaqan dunida dacaladeeda.
Warbixinta Gudomiyaha oo ahayd mid aad uxiisa iyo xamaasad badan aadna oogu riyaaqeen kaqaybgaleyaashii madasha fadhiday ayuu Gudomiyuhu siwanaagsan ooga xog waramay warbixinadii oogu danbeeyay ee Ciidanka wadaniga Xoraynta Ogadenya (CWXO).
Faah faahinta dhacdooyinka siminaarka iyo aqoon iswaydaarsiga hawlwadeenka JWXO ee qaarada Yurub oo galay maalintiisii 3aad galay kala socda warbixinadaanada danbe haduu eebuhu yiraahdo ee hafogaanina.